Samsung Gear S3 no fitaovana fampitaovana mety indrindra ho an'ny mpiasa hotely | Androidsis
Ny orinasa aziatika Samsung dia nanao fifanarahana tamin'ny vondrona hotely Viceroy Hotel Group hamorona fampiharana izay, amin'ny alàlan'ny Gear S3, mamela manatsara ny fiasa sy ny fifandraisana eo amin'ny mpiasa hotely sy ny mpanjifa. Ny maodely manokana hampiasain'izy ireo dia ny Gear S3 LTE, mety ho an'ny fangatahana rehetra avy amin'ny mpanjifa sy ny governemanta mba ho voatsabo haingana araka izay tratra.
Rehefa mangataka ny mpanjifa dia ny mpiasan'ny departemanta no miandraikitra ny fanomezana azy ireo mahazo fampandrenesana mangina ao amin'ny Gear S3 -n'izy ireo. Ny mpiasa izay handrakotra an'ity filàna ity dia mila mikitika fotsiny amin'ny efijery mba hanamafisana fa nahazo ny fampandrenesana izy ary hikarakara azy manokana.
Afaka ny fitantananan'ny hotely mihaona ara-potoana tena izy raha toa ka ny asa nanirahana ny mpiasa dia tanterahina amin'ny fomba mahafa-po na ny mpiasa, aorian'ny fotoana mety dia mbola tsy nanomboka nanao.
Ny hevitra fampiasana smartwatch no tsara indrindra ho an'ireo mpiasa rehetra zatra manao izany mila tanana roa izy ireo vao hiasa na manatanteraka ny asany, toy ny tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana ny efi-trano, ny fikojakojana, ny mpiandry ... Ny famaliana haingana araka izay azo atao ny fangatahan'ny mpanjifa dia singa iray lehibe amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny.
Ny trano fandraisam-bahiny voalohany nampihatra ny smartwatches Samsung miaraka amin'ny fampiharana hitantanana azy ireo, novolavolain'i ALICE, dia ny L'Ermitage Beverly Hills, alohan'ny hanombohana azy amin'ny hotely rehetra ananan'ity vondrona hotely ity manerantany.
Ity vahaolana ity haseho ao amin'ny HITEC 2018, fifaninanana izay atao amin'ny herinandro ho avy any Houston, Texas ary ny fivarotana azy dia kasaina hatao amin'ity fahavaratra ity. Averina indray fa ny filokana amin'ny Tizen fa tsy Wear OS dia hevitra tena tsara an'ny Samsung.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Samsung's Gear S3 no fitaovana fampitaovana mety indrindra ho an'ny mpiasa hotely
Jurassic Hopper, "Jurassic" mahazatra a la Crossy Road